ရွယ်ရောက်ညမ်းဂိမ်းများအတွက်:အခမဲ့ Xxx ဂိမ္းလိင်စာကြည့်တိုက်
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳရွယ်ရောက်ညမ်းဂိမ္း:အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစက်အပြောက်အင်တာနက်ပေါ်မှာအများအခုအချိန်မှာသင်၌စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဆှအခါမှာအကြားတိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသား။ မှတ်ချက်မှရသွားဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စက်ချုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်း–အထူးသဖြင့်မျက်နှာအရွယ်ရောက်အသိုင်းအထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊ဒါကြောင့်သင်သည်မပြုလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်တဦးဖြစ်၊ဒါကြောင့်စိတ်ကူးတစ်ခုသွားအမဲလိုက်အဘို့အသင့်ရဲ့နေ့စဉ် jerking ပစ္စည်း။, ခါတွန်းလာဖို့တွန်းပါတယ်၊ကျနော်တို့စွဲရန်အမည်ပေးခြင်း၏အဖြစ်အများအပြားဂိမ်းကစားသကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ရန်စွမ်းရည်ပျော်မွေ့သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်၊နှင့်တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီထံမှလက်ခံရရှိအဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအဘယ်သူသည်ပြီးသားတက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အရွယ်ရောက်ညမ်းဂိမ်းများ၊အမှုအရာလုပ်နေကြတော်တော်စုတ်။ နံပါတ်များအားဖြင့်ကြီးထွားလာကြသည်နေ့နှင့်ကျွန်တော်စတင်ဖွင့်ကြည့်ဖို့တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အလိုုင္းဃာနှင့်အတူ–အကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်အလေးအနက်အရွယ်ရောက်နှင့်အတူတစ်ဦးအစွဲဖို့ညစ်ညမ်းအတွက်ဤနယ်ပယ်တွင်။, ဒီတော့သူကပြောပါတယ်နဲ့အတူ၊ကုန်အပေါ်အက်ကွဲနှင့်အကြောင်းပြောဆိုရန်ဒြပ်စင်၏ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအလုပ်သိပ်ကောင်းတယ်။ သဘာဝကျကျ၊သင်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်လက်ျာဘက်ယခုသင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပူးပေါင်းအရေးယူအပေါ်–ရွေးချယ်မှုအားလုံးရင်းသင့်သည်!
လူတွေအများကြီးသဘာဝကျကျကြည်၏စိတ်ကူးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဤလိုအပ်:ဒါကြောင့်အများအပြားဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် malware nasties ထွက်ရှိပါတယ်အပေါ်ဖျက်ဆီးပါသညျ။ တဦးတည်း၏အတောက်ပသောအမှုအရာအကြောင်းကိုရွယ်ရောက်ညမ်းဂိမ်းအကြောင်းရိုးရှင်းသောတကယ်တော့ကျွန်မတို့အသုံးပြုဖို့ရာက္ဇာအတွက်အရာအားလုံး၊ဒါကြောင့်သင်စရာမလိုဘာမှဒေါင်းလုပ်သင်၏ဒေသခံစက်လျှင်သင်ချင်ကြပါဘူး။ ဤသည်လုံးဝသည်ဟု့အဘို့အပျမ်းမျှအကြောစားသောအလားအလာအတွက်၊ဝန်တစ်ခုခေါင်းစဉ်နှင့်အတူပြုဒါကြောင့်အတော်လေးအလျင်အမြန်။, ကျွန်ုပ်တို့သည်အစပိုင်းတွင်ထင်အပြေးအဆိုက်မှတဆင့်ရာက္ဇာခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့လမ်းအမှုတို့ကိုပြု၊ကျွန်တော်သဘောပေါက်တော်တော်စောတဲ့အကြောင်းအမှန်တကယ်သာလွန်သောအတွက်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး၏နံပါတ်။ ဖြစ်ကောင်းအရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအရွယ်ရောက်ညမ်းဂိမ်းများဝန်တက်သက်သာတဲ့အခါဝယ်လိုအားအပေါ်လိုချင်သော–အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပတ်ပတ်လည်စောင့်ဆိုင်း! ဒီနည်းလမ်းသင်သည်လည်းစမ်းသပ်အရာကိုရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးလျှင်ခံစားမှုကိုပထမဦးဆုံးမိနစ်အနည်းငယ်၏ခေါင်းစဉ်၊ဒါကြောင့်သင်နှင့်တူစောင့်ဆိုင်းတစ်နာရီအရဖိုင္မ်ားပြီးနောက်လျှင်အဖြစ်ခံစားရပြီးပြီဖြုန်းအားလုံး။, ငါတို့သည်လည်းအဘို့အကလွယ်ကူမည်သူမဆို၊မည်သည့်အပေါ်မှာစက်ဝင်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စအရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများ။ သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်အ Chrome၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီ–ကြွင်းသောအရာသမိုင်း!
ရွယ်ရောက်ညမ်းဂိမ်းစတင်ထုတ်လုပ်ဖို့ခေါင်းစဉ်၏ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၁၇၊အောင်နေစဉ်ကျနော်တို့အတော်လေးအသစ်အားဖြင့်အင်တာနက်စံချိန်စံညွှန်းများ၊ကျနော်တို့အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးထုတ်လုပ်မှုအာကာသအဘို့အတော်လေးအချိန်အတန်နှင့်အရေအတွက်ရှိ၏ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ငါတို့၏ခါးပတ်။ ယခု၊အဆိုပါစာကြည့်တိုက်မှာပါဝင်ပါသည် ၃၃ ဂိမ်းများနှင့်အတူ၊ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ၇ ထည့်သွင်းခံရဖို့အပေါ်စုဆောင်းသင်တစ်ဦးနှစ်စဉ်အခြေခံ။ သူကပြောပါတယ်၊လာမည့်နှစ်တွင်စီစဉ်ငှားရမ်းရန်နှစ်ခုအသစ်သည္ကိုပြီးသူတို့ဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့အမှန်တကယ်တိုးမြှင့်အရည္ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုကြိမ်။, ကျော်နှင့်အတူ ၃၀ သန့်နှင့်ထူးခြားတဲ့ဂိမ်းများကစားရန်–အသီးအသီးသောအလုပ်ပတ်ပတ်လည် ၃ ရန် ၅ နာရီနိုင်ရန်အတွက်ဖြည့်စွက်ဖို့ရှိပါတယ်၊အများကြီးတစ်ငရဲ၏ပျော်စရာဖြစ်လက်ထဲမှာ။ ကျွန်တော်တို့လည်းဗီဒီယိုများထုတ်ဝေသောအင်္ဂါပြန်ရွယ်ရောက်လိင်နှင့်အတူအချို့သောအသံကျော်–အလွန်ကြီးစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာအဖွဲ့ဝင်များမှာမဟုတ်ကြဘူးလျှင်သူတို့ခံစားရရှိခြင်းကဲ့သို့သောအဆင့်အပြန်အလှန်တဲ့ဂိမ်းဆောင်ခဲ့။ ပေးချင်ပြီးအကြံဉာဏ်အပေါ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ပြုအပ်သောရန်ဘေး?, ကြီးစွာသောအရာကရွယ်ရောက်ညမ်းဂိမ်းများကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာအစဉ်အမြဲမှလူများအတွက်ရှာဖွေနေအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရကောင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဖွင်၊ဒါကြောင့်ပွင့်အဖက်ဆာဗာနှင့်ခြေအိတ်က–မွာယူနှစ်ဦးစလုံးအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကြံဉာဏ်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများ၏ဤလောကအတွက်ဤအမျိုးအစားဂိမ်း!
ငါပြုသောအမှုဖွင့်တစ်ဦးလျောက်ပတ်သောလုပ်ပေးခြင်း၏သင်အနည်းငယ်ထြင္ခ်င္လာ၏လောကသို့ရွယ်ရောက်ညမ်းဂိမ်းများ၊သို့သော်အချို့အမှုအရာပိုကောင်းအထားအဖြစ်လျှို့ဝှက်ချက်နိုင်အောင်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသူတို့ကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ။ ကျေးဇူးတင်ဖို့အချိန်ယူပြီးစက်အားဖြင့်၊ဒါပေမယ့်အခုညာဘက်အချိန်တွင်သင့်အဘို့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်–အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွေထက်လျော့နည်းကြာ ၆၀ စက္ကန့်–နှင့်ထွက်ကြိုးစားဖို့အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်ဘာမှမလုပ်ဆောင်ခင်။ ငါသည်သင်တို့၌အာမခံသောအရွယ်ရောက်လှုပ်ရှားမှုများအတွင်းကြသည်ဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယကြောင်းခင်ဗျားချစ်သွားတိုင်းပြီးခဲ့သည့်ဒုတိယအရာကိုကျနော်တို့စားပွဲပေါ်မှာ။, ဒါကြောင့်၊သင်ကအကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ဂိမ္းအင်တာနက်ပေါ်စုဆောင်း။ တက်လက်မှတ်ထိုးပြီးကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်၊သင်သည်အခြားဘက်ခြမ်းတွင်မင်္ဂလာ!